Guul Wadayaasha Mustafe sax iyo Khalad ba ku Taageersan !. | ogaden24
Feb 20, 2019 - Aragtiyood
Marka Qaddiyada ummada kadhaxaysa iyo maslaxadda shaqsigu ay isku ekaadaan waxaa dhab ah inay isku milmayaan xaqa iyo baaddilka, Taas oo bulshada inteeda badan aanay kala saari karin ‘Maxaa xaq ah maxaase baaddil ah?.
Dadka indheer-garadka ah ee wax qiimeeya oo badanaa tiroyar ah marka laga soo tago dadwaynaha waxaa ku adkaata inay kala gartaan wixii khalad ah iyo wixii sax ah.
Xilliyadii uu sii dhacayey; cabdi-ilay waxa uu isku dayey in badan inuu isku khaldo; rabitaankiisa gurracan, xaqiiqada dhabta ah iyo waaqaca saxda ah ee jiray, taas oo ahayd inuu meesha banneeyo Gar iyo Gardarraba.
Hadda waxaa socota tii mid-u-eg oo la doonayo in loo dhigo qofkii Mw Mustafe iyo maamulkiisa difaacaa xaq ayuuku-taagan tahay, qofkii kale ee waxbaa khaldan dhahaana uu yahay nin cadowga ummadda u shaqeeya.
Guul-wadayaasha ayaa geed-dheer iyo mid gaaban ba u fuulay sidey isugu khaldi lahaayeen labadaas arrimood. Kama oggolaanayno; inay na khaldaan, isbaddalka iyo rajada ummadda markii la soo hujuumo innaga ayaa uga horraynayna dagaalka iyo difaaca wixii xaq ah.
Innagu ma fiirinayno; yaa xilka haya iyo yaa mucaarid ah sidooda ee waxaan ka duuleynaa qaddiyad ummadeed taasoo ah inaan rajada shacabka dulman la lumin oo aan la afduubin.
Maamulka madaxwayne mustafe, waxa uu lee yahay dhalliilo fara badan oo gudaha ah, gaar ahaan qaabka uu u xalliyey; mushaakilkii ka taagnaa deegaanka, qaabka loo dhisay xukuumadda iyo maamulka heer-deegaan illaa heer tuulo. Sababtu waxaa weeye; in qabiil wax walba lagu saleeyey.
Arrintaas oo aan u adeegayn masaalixda bulshada soomaali-galbeed, ayaan u arkaa inay tahay khaladaadka ugu wayn ee la galay lixdii bilood ee madaxwayne mustafe meesha joogay. Waxaa kale oo la sheegayaa inay qabyaaladdu marayso meeshii ugu sarraysay, iyada oo dadka wax dhallilaa sheegeen arrintaas uu madaxwaynaha laftiisu dabada ka riixayo.
Laguma hallayn karo ruux sidii oday jir-jirroolaha u dhaqma oo isla baddala dowladda, hadba dhinaca ay ujeedsatana u raaca, ee waxaan u baahan nahay dad difaaca wixii ‘National Issue ah’ oo aan marna ka gaabin danta guud.
Hase ahaatee; waxaas oo dhami qaddiyad ummadeed ma aha, waana wax la xallin karo oo aad u sahlan. In kasta oo muddada maamulku jiraa ba ay aad u yar tahay, haddana waxa lagu dhalliili karo ayaa ah inaan lahayn wali xaqii innagaga maqnaa dowladda dhexe (Wax badan ayaa laga qaban karay ayaan is lee yahay lixdaas bilood) Dad badan ayaa filayey in hadda la taagan yahay xilligii lala xisaabtami lahaa itoobiya oo aan xaqiraad iyo bahdil innagu haysa. Laakiin aad looga gaabiyey.
Waa xaq-darro in la is barbar-dhigo; maamulka hadda jira iyo mujrimiintii dadka halaagay. Taas dagaal ayaan la galnay. Laakiin tan waxaa naga haysa lexejeclo, waxaanan dooneynaa inaan la leexin masiirka shacabka. Waxaan rabnaa Mustafe oo haggaanka innoo haya inaa guulaysanno oo wixii khaldan la saxo. Intaas ha la isla fahmo! Isbaddalkuna hal qof dan uma aha ee waa wax loo baahan yahay inaan wada ilaashanno!